Waxaa lagusoo waramayaa in Wilaayada Islaamiga Shabeelaha Hoose ay sheegtay in ay dhaqaale iyo Ciidan uga qayb qaadanayso dagaalada ka socda Gobalada Banaadir iyo G/gaduud. | Halganka Online
Waxaa lagusoo waramayaa in Wilaayada Islaamiga Shabeelaha Hoose ay sheegtay in ay dhaqaale iyo Ciidan uga qayb qaadanayso dagaalada ka socda Gobalada Banaadir iyo G/gaduud.
Wilaayada Islaamiga Gobalka Shabeelaha Hoosea yaa shaacisay in ay Ciidamo farabadan u soo dirayso Gobalada Banaadir iyo G/gaduud oo ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya xoogaga Islaamiyiinta ah iyo maleeshiyaadka cadawga u adeega.
Waaliga Wilaayada islaamiga Shabeelaha Hoose Sheykh Max’med Abaa Cabdalla ayaa magaalada Marka ka sheegay in wilaayadu ay diyaarisay ciidan xoogan iyo dhaqaale ay ku taageerayso dagaalada Jihaadka ah ee ka socda wilaayaadka kale.
Sheykha ayaa tilmaamay in Boqolaal dhalinyaro ah ay iska soo diiwaan geliyeen xarumaha wilaayada si ay uga qayb qaataan Jihaadka Somaliya islamarkaana ay u direen Mucaskaraad gobalka ku yaal si tababaro ciidan loo siiyo.
Wilaayada ayaa faah faahisay qaabka ay uga qayb qaadanayso dagaalada G/gaduud iyo Banaadir ka socda waxayna sheegtay in ay diyaarisay dhaqaale adag oo lagu taakulaynayo Ciidanka iyo Ciidan ku hubaysan gaadiid dagaal oo bilihii la soo dhaafay ay diyaarinaysay wilaayada Shabeelaha Hoose.
“Wilaayada Shabeelaha Hoose waxay dhawaan ciidan iyo dhaqaale uga qayb qaadan doontaa Jihaadka ka socda G/gaduud iyo Banaadir’ayuu yiri” Sheykh Max’med Abaa Cabdalla oo shacab kula hadlayay magaalada Marka.
Sidoo kale Wilaayada Shabeelaha Hoose ayaa maamul cusub u samaysay magaalada Marka xarunta gobalka, waaliga cusub ee magaalada Marka ayaa loo magacaabay Sheykh Farxaan Daahir Warsame.
Waa Wilaayadii 2-aad ee Ciidan iyo dhaqaale ugu deeqda dagaalada Jihaadka ah ee ka socda G/gaduud iyo Banaadir, wilaayada islaamiga Bay iyo Bakool ayaa horay usoo dirtay Ciidan iyo dhaqaale.
« Axmed Madoobe:ciidanka dowlada ridada iyo cid alaale cidii la dagaalamaysa xarakada mujaahidiinta alshabaab waan ku garab siinayaa fagaaraha dagaalka u baneenaa. Xarakatu shabaabul mujaahidiin oo faahfaahisay camaliyadii Istish-haadiga ee Lagu Halaagay Saliibiyiinta AMISOM (DAAWO SAWIRADA) »